[SOMALI] Ku Ilaali Qoyskaaga Tallaal, Baaritaan iyo Kulan Ammaan leh (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering) | News & Blog | KFAI - Minneapolis + St. Paul
[SOMALI] Ku Ilaali Qoyskaaga Tallaal, Baaritaan iyo Kulan Ammaan leh (Protect Your Family With Vaccines, Testing and Safe Gathering)
Baaritaanka COVID-19covid-19KobciyeyaashaTallaalladaTallaallada carruurta
Bishii Diseembar dhexdeeda, kiisaska COVID-19 ee toddobaadlaha ah ayaa gaarey heerkii ugu sarreeyay tan iyo sannadkii hore. Si loo yareeyo faafitaanka caabuqa coronavirus-ka cusub, xarumaha caafimaadka dadweynaha sida Waaxda Caafimaadka ee Minnesota iyo Xarumaha Xakamaynta Cudurrada ayaa waxay bixinayaan hagitaan lagu caawinayo ilaalinta qoyskaaga inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Carruurta da’doodu u dhaxayso 5-11 hadda waxay xaq u leeyihiin tallaalka Pfizer COVID-19. Carruurta si buuxda loo tallaalay waxay aad ugu dhowdahay in aan isbitaal la seexin haddii ay la kulmaan caabuqa corona ee cusub. Marka loo eego Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, carruurta si buuxda loo tallaalay sidoo kale maaha inay guriga joogaan (karantiil) haddii ay la kulmaan qof qaba COVID-19. Tallaalka Pfizer ee carruurta da’doodu tahay 5-11 waa qiyaas ka yar tallaalka Pfizer ee dadka da’doodu tahay 12 iyo wixii ka weyn. Ilmahaagu wuxuu u baahan doonaa qaadashada laba goor qiyaaseed oo tallaalkan ah. Waa inay qaataan qiyaasta qaadashada labaad 3 toddobaad kadib qiyaasta tii kowaad. Waa muhiim in la helo qaadashada labada qiyaasood ee tallaalka ilaalinta ugu fiican.
Wax badan ka baro tallaallada carruurta halkan: https://mn.gov/covid19/vaccine/vaxforkids/
Laga bilaabo horraanta Diseembar 6-deeda, Minnesota waxay sidoo kale bixin doontaa kobciyeyaal meelo badan gobolka ah iyo goobaha uu marti-geliyey gobolku ee xarumaha caafimaadka talaalka ubadka 5- ilaa 11-jirka ah, oo ay ku jiraan kuwa lagu qabto dugsiyada. Ku dhawaad ​​35 xarumood oo tallaal oo ku salaysan dugsi-goboleed da’doodu u dhaxayso 5-11 ayaa bilaabi doona siinta talaalada kobciyaha ah waalidiinta carruurta qaata tallaalkooda kowaad ama labaad bisha Diseembar iyo toddobaadka ugu horreeya ee Janaayo. 5-11 xarumood oo tallaal oo dheeraad ah ayaa bilaabi doona bixinta kobciyeyaal inta qorshayntu socoto. Qof kasta oo da’diisu tahay 18 jir ama ka weyn oo si buuxda loo tallaalay wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo tallaal kobciye ah. Sida laga soo xigtay CDC, haddii aad qaadatay Pfizer buuxa ama taxanaha tallaalka Moderna, waxaad xaq u leedahay tallaal kasta oo kobciya 6 bilood ka dib tallaalkaagii ugu dambeeyey. Haddii aad markii hore qaadatay hal tallaal oo Johnson & Johnson ah, waxaad xaq u leedahay tallaal kasta oo kobciye ah laba bilood ka dib qaadashada tallaalkaagii qiyaaseed ee ugu dambaysay.
Waxaad ka heli kartaa tallaalka kobciyaha ee COVID-19ka. vaccines.gov ama khariidadda goobta tallaalka ee Gobolka Minnesota (vaccine locator map).
Badbaadada iyo Baaritaanka Kulmada xilligga Jiilaalka (Winter)
Iyadoo Christmas-ka, Kwanza iyo Sannadka Cusub uu soo dhawaanayaan, ayaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay siisaa hagitaan qoysaska isugu imaanaya gudaha goobaha kulanmada ee xilliga qaboobaha (winter):
– Is tallaal haddii aad u qalanto, oo ay ku jiraan kobciyeyaasha ee kooxaha lagula taliyey.
– Hoos isu qari intaadan tagin. Ka fogoow goobaha dadku ku badan yihiin dhowr toddobaad ka hor.
-Is baar dhawr maalmood ka hor kulanka, ama isku baar goobta baaritaanka ama barnaamijka isku-baarista guriga. Natiijooyinku waxay qaataan 1-3 saacadood baaritaanka degdegga ah sanka loona yaqaan antigen-ka, iyo baaritaanka PCR ee candhuufta oo qaata 24-72 saacadood.
– Guriga joog haddii aad leedahay astaamo ama haddii lagaa helay COVID-19.
-Isticmaal dhowr lakab oo ilaalin ah. U xiro maaskaro meelaha dadku ku badan yahay iyo weliba joogista bannaanka/dhaqdhaqaaqyada bulshada kala fog-fog halka ay suurtogal tahay, gaar ahaan haddii aad la kulmaysid qoysas badan, jiilal badan, dadka aan tallaalnayn, ama dadka ku jira kooxaha khatar caafimaad oo sare leh.
Wax badan ka baro: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/celebrations.html
Dhammaan intayada ku sugan KFAI, waxaan kuu rajeyneynaa farxad, caafimaad qab Sanad Cusub ee soo socda!